Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh ay Dhashay oo saxaraha dalka Yaman Oon ugu dhintay | warsugansomaliya.wordpress.com
Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh ay Dhashay oo saxaraha dalka Yaman Oon ugu dhintay
Wararka ka imaanaya dalka Yaman ayaa ku waramaya in Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh yar oo ay dhashay ay dalkaa ugu geeriyoodeen Harraad dartiis, Wasaaradda arimaha gudaha dowladda Yaman ayaa sheegtay in booliska dalkaas ay saxaraha gobolka Almehra ka heleen Meydka Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh ay dhashay oo ay sheegeen iney Oon u dartiis u geeriyoodeen.
Booliska dalka Yaman ayaa sheegay in Hooyada ay Meydeeda heleen ay ku ogaadeen baaritaano ay ku sameeyeen in hooyada oo 39 jir ahayd iyo Gabadha ay dhashay oo oo da’deeda ay ku qiyaaseen 2 sano jir iney Harraad u dhinteen xilli sida ay sheegeen ay dooneysay iney si sharci darro ah ku gasho dalka Cumaan.
Meydka Hooyada Soomaaliyeed iyo Gabadha ay dhashay ee Oonka u geeriyooday ayaa xiligan lagu hayaa Cisbitaal ku yaal Magaalada Gaydha ee xarunta gobolka Almehra ee wadanka Yamay,Saraakiisha booliska dalka Yaman ayaan wali shaacin magaca Hooyada Soomaaliyeed ee ay Meydkeeda kasoo heleen Saxaraha gobolka Almehra oo kala qaybiya wadamada Yaman iyo Cumaan.
Dhacdadan ayaa qayb ka ah dhacdooyin soo jireen ah oo ay dadka Soomaaliyeed la kulmayeen tan iyo wixii ka danbeeyey burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya markaas oo badii dadkii Soomaaliyeed ay dalka ka carareen qaar badanoo kamid ahne ay ku geeriyoodeen Saxaraha Afrika iyo badaha caalamka.
Maxaad kataqaan Taariikh nololeedka Abuu Mansuur Al-Imriki oo maanta Al-Shabaab Dileen?(Daawo Sawirro)
Samafalayaashii MSF ee afduubka logu heystey Soomaaliya oo maantey gaaray Spain
← Samafalayaashii MSF ee afduubka logu heystey Soomaaliya oo maantey gaaray Spain
Gudoomiyaha baarlamaaka Soomaaliya oo dhalinyarada ugu baaqay iney Midoobaan →